Maxkamada Darajada 1aad ee danbiyada culus oo xukun ku riday Eedaysanyaal
Gaalkacyo:- Maxkamada Darajada 1aad ee ciidanka iyo danbiyada culus ee Puntlland ayaa waxaa la horkeenay shalay eedaysanayaal gaaray ilaa 49 qof oo ku kala eedaysan danbiyo kala ah ka tirsanaan ururka Al-shabaab ,askar ka tirsan ciidanka Puntlland oo lagu eedeeyey falal amaan daro in mudo ahna ku xirnaa Xabsiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka ee dowlladda Puntland C/laahi Xirsi Cilmi oo la hadlay saxaafada ayaa u sheegay in Maxkamadu ay maalmihii la soo dhaafay ay ku jirtay baaritaan dadka xiran iyagoo markii danbe guul ka gaaray kuna dhawaaqay xukun ka eedaysanayaasha. Xeer ilaaliyaha Guud ee Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka Puntland C/laahi Xirsi Cilmi ayaa sheegay in 16 qof oo ka tirsanaa eedaysanayaasha Xabsiga laga siidaayey ka dib markii lagu waayey wax danbi ah halka intii kale lagu riday xukumo 3 ilaa 5 sanno oo xariga ah.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka Puntlland Axmed Cabdi Bootaan ayaa isagu ku dhawaaqay xukun lagu riday eedaysanayaasha isagoo xusay in tirad guud ee eedaysanaaysha Maxkamada la horkeenay ay gaarayeen ilaa 49 qof Maxkamaduna ay kiiskooda ku soo diyaaraysay mudo dhan 10 cisho. Guddoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka Puntlland Axmed Cabdi Bootaan ayaa sheegay in eedaysanayaashu la xukumay ay gaarayaan ilaa 25 qof , 19 ka mid ah ay yihiin dhalinyaro ka tirsan ururka Al-shabaab iyo 6 ka mid ah ciidanka Puntlland oo geystay falal lid ku ah halka 16 qofna laga sii daayey Xabsiga dhexe ilaa 3 qofna kiiskood dib loo dhigay.
Dhinaca kale eedeysanayaasha la xukumay ayaa markii xukunka lagu ridayey waxaa goobta joogay Duqa Degmada Gaalkacyo Siciid Cabdi Faarax, Guddoomiye xigeenka Gobolka Mudug Farxaan Cali Xirsi, Guddoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka Puntlland iyo Axmed Cabdi Bootaan, Xeer ilaaliyaha Guud ee Maxkamada Darajada Koowaad C/laahi Xirsi Cilmi